AQUASLIDE | AquaSlide | Soosaaraha iskeelka biyaha - qaab dhismeedka ciyaarta - aquaslide.fr
Waxqabadka-6176a47b181b8 el, moode: 'dheji', xog: 'Return_url lama helin / lama helin
QURUX BADAN gaar ahaan halkaan Biyo Goyn xuduud la leh raaxada iyo teknolojiyadda. Kaamani wuxuu siiyaa naftiisa jawharad la yaab leh markii ugu quruxda badnaa slide biyaha ku jira ka dhigeysa mid ka mid ah calaamadaha barnaamijka cajiibka ah. Fuula koonaha 'AquaSlide' oo soo hel noocyada ugu dhameystiran ee qalabka biyaha ku jira iyo cayaaraha xiisaha badan.
- Soo ogow tirada ugu ballaaran ee slide biyaha ku jira oo weydii buugyarahayaga.
QIIMAYNTA IYO QIIMAHA tan slide baarkinka biyaha AquaSlide. Tilmaamteeda iyo muggeedu waxay siinayaan dabeecad aan caadi ahayn. Isbarbar la'aan, tan slide baarkinka biyaha waa milicsiga waqtigiisa waana hubaashii xaga naqshadaynta iyo uur qaadka haybadaysan.
- Baahi kala duwanaanshaha 'AquaSlide' iyo bogagga baarkinka biyaha ee ergonomics leh waqtiyada ...
KELI IYO KALIYA, iskudarsanaanta Barkadda barkadda mashruuca himilada leh wuxuu caqabad ku yahay hanashada qaab dhismeedka qaab miyir-qab ah. Qurux dabiici ah oo aan la qiyaasi karin, tan slide pool wuxuu muujiyaa rabitaanka ah inuu ka baxo caadooyinka, maxaa yeelay dhaqammada baxsashadu waxay muhiim u tahay farxadda carruurta.
- Ku soo rogo saxiixa AquaSlide iyo tayada hoose ee barkadda tayada leh ee soo saaraha caanka ka ah adduunka.
KHILAAFKA KALA DUWAN, Ciyaarta biyaha lagu beeray goob aad u qurux badan, waxay ku barbaarisaa dhalinyarada qaan gaar ah. Cajiib ahaan qaab dhismeedkeeda, ciyaartan sharafta leh ee ciyaarta waxay dhalisay dareen waxayna si dhakhso leh u noqotay tiyaatarka ciyaaro badan oo loogu talagalay carruurta. Isku-darka bogagga biyaha, weir iyo aalado isku mid ah. Flop-flop ah oo ku yaal meel aamin ah, caddeyn u ah xad-gudubkooda, khiyaaligooda sixirka iyo dhalanteedka.
- Codso qoraalkaaga jeu biyaha ku jira si loo wadaago raaxada.
DIIWAAN GELINTA, qoroyaasha ayaa tan ku soo koobaya Qaab-dhismeedka ciyaarta ee Custom-dhigay si isku dhafan oo aan caadi ahayn. Waxaa loogu talagalay raaxo aan la qiyaasi karin, qaab dhismeedka haybad ee sharafta leh oo lagu sameeyay daryeelka ugu weyn xafiiskayaga nashqadeynta, wuxuu u ogolaanayaa iskudhafyo badan oo bixiya dusha sare ee ugu dambeyn la awoodi karo Isku-darka farsamooyinka tiknoolajiyada ayaa sidaas loogu daayay jahwareerka carruurta koolkoolinta ...
- Dalbo kanaga ciyaarta qaabdhismeedka qiimaha ee kaambada oo leh fantasyo waaweyn.
ISBAHAYSIGU HAYN ee jawiga iyo isbadalada cusub, theMeesha lagu ciyaaro gudaha waa milicsiga horumarka heshiis buuxa ku ah shuruudahayada waxbarasho. Baadh hantida badan ee qaabka iyo fursadaha badan eeaagga ciyaarta gudaha sida wax ku oolka ah sida ay u yihiin kuwa soo jiidasho leh. Sida ciyaarteena xiisaha leh, qaabdhismeedka ciyaarta xirfadeed waxaa lagu kala saaraa horumarka carruurta yaryar.
TALAD CUSUB, mid gaar ah iyo mid Snobbish ah, tan Wabi duurjoog ah wuxuu kuu horseedayaa xilliga firaaqada iyo nasashada. In raadadkii halyeeyada, the webi duurjoog ah koorso dabacsan iyo qalaad ayaa kugu sugeysa jannada. Jacaylka sahaminta iyo halyeeyga, dhiirrigelinta kama maqna booska muuqda Wabiga Laaban ou Wabiga gaabis ah.
- Soo ogow farxadaha wabiga duurjoogta ah, oo indho sarcaad!
CAAFIMAADKA HESHIIS ee tan xero barkad weyn waayo kaamamku wuxuu calaamad u yahay saxeexa dhabta ah ee horumarka aan la qiyaasi karin. Tan awgeed xero barkad weyn, aan diirada saarno mudada waqtiga. Xaqiiqdii, waxaad ku wareejin doontaa farcankaaga! Ka tagista calaamadeeda caalami ahaan, AquaSlide waxay gaartay meesha ugu sareysa ee quduusnaanta ee dabaasha dabaqda sare ee dhismaha.
- Weydiiso magac-bixinta barkadda dabaasha AquaSlide oo leh naqshad deeqsinimo leh.
QURUXDA IYO RAAXADA iftiiminta Alaabta barkadda. Moodhadhku mar dambe ma ahan riyo-qabe laakiin waa lagama maarmaan. AquaSlide, abuuraha jawiga iyo ladnaanta, waxay kaa dhigeysaa inaad ogaatid alaabta barkadda ee dib loo eegay dhadhanka macaamiishaada. Ururintayada quruxda badan ee alaabta barkadda ayaa la kulantay khayaaliga xad-dhaafka ah.
- Ku dheji alaabta barkadda dabaasha, Nooca iyo qaybaha xarrago.
Ku guuldareysiga inaad kobciso riyadaada heer sare ah, aan si toos ah ugu ifino kooxdeena noocyada badan leh.
Tallaabo ka horaysa hal-abuurnimada, saaxiibkayaga ugu fiican wuxuu qaadanayaa udgoon run ah oo ku saabsan 30 Sanno ee waxqabadkeenna.
AquaSlide, waxay marka hore horumarinaysaa qalabka ballaaran ee lagu dabaasho ee Yurub, AquaSlide waxay u dhaqantaa sidii a soo saaraha biyaha, Barxadda barkadda dabaasha, slide-ka baarkinka biyaha iyo ciyaarta biyaha.
AquaSlide hadda waxay leedahay jago caan ah sida barkadda soo saaraha barkadda Faransiiska iyo caalamkaba, ayaa kicinaya Qaab dhismeedka ciyaarta, aagga ciyaarta ee gudaha laakiin sidoo kale wabiga duurjoogta ah, barkadda dabaasha iyo alaabta barkadda.
Xafiiskayaga qaabeynta ayaa si joogto ah ula jaanqaadaya xalka mashaariicdaada, kaa taageeraya marxalad kasta oo aad wax baraneyso isla markaana kaa qaadaya waajibaadkaaga.
Aqoonta-kooxaheena maadooyinka kaladuwan waxay buuxiyaan baahiyaha iyo heerarka ugu sareeya biyo boodh xirfad leh ku xiran ganacsi aad u takhasus badan.
AquaSlide waa meel kasta oo ka mid ah qaybaha, hoteelada banaanka iyo jardiinooyinka biyaha leh faylalka tacliimeed ee tixraaca deynteeda.
Mashruuc waliba waa milicsiga waqtigiisa ...
... kuweenu waa tixraaca
Cinwaanka emailkaa waxaa laga ilaalinayaa xayeysiisyada. Waa inaad awood u yeelatid jadwalka si aad u aragto.